SomaliaReport: Tuhumo Ku Saabsan Markabka IZUMI
By ANDREW MWANGURA 03/16/2011
Bilayska Kenya oo Qabtay Laba qof wata jinsiyadda Ingiriska iyo Nin Kenyan ah, Shaqaalahi Markabka oo dib ugu laaban doona dalkoodii hooyo. Muddo ku dhaw afar bilood oo ay shaqaalhii fuushanaa markabkii MV IZUMI.ku sugnaayeen xaalad cakiran oo lahaystanimo, ayaa waxaa la gaadhay xilligii oodda laga qaadi lahaa. Sababo amni dartood ayaa waxaa shaqaalaha markabka loo soo jeediyey inaysan saxaafadaha warbixino la wadaagin. Isla markaana soo koobaan wada-hadalo dhex mari lahaa iyaga iyo diplomaasi ka soo jeeda dalka Filibiin laguna magacaabo Rodger Gonzales.
Mudane Gonzales oo ah sarkaal sare ayaa wuxuu u sheegay wargayska Somalia Report in loo oggolaaday kaliya muddo ku eg 20 daqiiqadood inuu su’aalo shaqaalaha. Illaa iyo talaadadii waxaa xaaladda markabkan ku soo xidhay dekeddea Mombassa hadheeyey shaki xoog leh ka dib markay bilayska Kenya qabteen saddex ajaanib oo ka mid ahaa rukuubkii markabka, iyada oo kolkii danbena loo sii gudbiyey xafiiska hay’adda dabagalka ee CID si looga helo warbixino loona sii waydiiyo su’aalo dheeraad ah. Sida la sheegayo waxaa laga helay markabkan ka soo shiraacday dhanka Soomaaliya gumac iyo rasaas isugu jira kuwo la riday iyo kuwo kaleba, waxaa intaa dheer in ajaanibta oo ka koobnaa muwaadin Kenyan ah iyo laba haysta jinsiyadda ingiriiska , midkoodna uu ku hadlo luqada sawaaxiliga ayay bilaysku gacanta ku dhigeen Xaalado amni dartoodna bilsyku way ka gaabsadeen shaacinta magacyadooda. Bilaysku waxay sidoo kale baadhid ku wadaan doomaha loo yaqaan Tug boat-ka ee laga leeyahay Mombasa kuwaasoo sida la mala-awaalayo xidhiidh la lahaa afduubkii loo gaystay markabkii MV IZUMI-Doomahan ayaa ah kuwa loogu talo galay inay maraakiibta la afduubto u geeyaan biyaha, shidaalka, aaladaha loo baahdo iyo wixii madax-furasho ah ee la isku afgarto. Bishii April ee sanadkii tagay ayey bilayska Kenya gacanta ku dhigeen mulkiilaha doon u dhashay dalka Tanzania iyo lix muwaadiniin Soomaaliyeed ahaa ka dib markii lagu soo eedeeyey inay wateen hub sharci darro ah isla markaana ay si xeer-jabin ah ku soo galeen dalka. Bilayska ayaa dhamaantood u sii gudbiyey maxkamadda sharciga. In kasta oo doontan oo uu ka babanayo calanka dawladad Siere leon, bishii hore ee May-na laga saaray liiska doomaha diiwaanka gashan , dhanka kalena ay mas’uuliinta ciidamada baddu ka mamnuuceen inay dhex sabayso biyaheeda inta laga soo afjarayo baadhis socota aya haddana waxay si tuhun ku jiro loogu arkayey dhul-xeebeedka Mombasa.
Markabkan MV IZUMI oo uu ka lulmaday calanka dawladda Panama kana soo kicitimay Japan, isla markaana Mombasa uga sii gudbayey Singapore ayey budhcad-badeedda soomalaiyeed ku afduubteen badweynta Hindiya taaiikhdu markay ahayd octobar tobankeeedi ee sanadkii tagay. Sagaal iyo toban ka mid ah labaatankii ahaa shaqaalihii saranaa markabkan ayaa la flilayaa inay jimcaha ku noqdaan dhulkoodii hooyo ka dib markay ku sugnaayeen xaalad cakiran muddadii ay lahayste-yaasha ahaayeen. Xubinka kale ee shaqaalaha markabka ahaa ayaa ku sii hadhaya markabka si uu ugu sii simo guutada kale ee la waraygaysa shaqaalanimada markabka, shaqaalaha cusubi waxay ku sugan yihiin hoteelkooda, waxayna la wareegi doonaan markabka jimacahan si markabku u gaadho bartilmaameedkii uu ku sii jeeday.